एक स्लिम आंकडा लागि उपयोगी खाने
उचित पोषण - स्लिम आंकडा र राम्रो स्वास्थ्य को संरक्षण को लागि एक जरूरी। दुर्भाग्यवश, धेरै dieters राम्रो पोषण को सिद्धान्त पालन छैन: एक कठोर आहार र पनि भोक मा बस्न, बरु भन्दा आहार बानी सही मा विकास गर्न।
सायद सबैभन्दा विवादास्पद भोजन खाने गर्न मानिन्छ। केही आधुनिक आहार यो भन्दा बढी छोड्न सिफारिस गरिएको छ, तर व्यावसायिक nutritionists त कोटिगत छैन हो, खाने हल्का हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। र पनि परंपरागत सानो अंश मा खाने कम क्यालोरी व्यञ्जन सेवा गर्ने जापानी, उदाहरण उद्धृत।
त्यसैले, विशेषज्ञहरु को सल्लाह निम्न, साँझ खाना4घण्टा भित्र सुत्नेसमय अघि सुरु गर्नुपर्छ र ती उत्पादनहरू एक वयस्क लागि समावेश गर्ने को दैनिक क्यालोरी कुनै 20% भन्दा समावेश। वयस्क क्यालोरी को दैनिक दर 2500-4500 हजार क्यालोरी (लिङ्ग, उमेर र व्यक्ति को जीवन शैली आधारमा) बाट फरक हुन्छ।
यो सबै भन्दा राम्रो साँझ भोजन, पेट मा लामो रहन छैन भनेर ती उत्पादनहरु लागि उपयुक्त छ, र समय सुत्नेसमय तिनीहरूले सुरक्षित आन्द्रा गर्न बसाइँ सर्छन्। एक-दुई घण्टा पेट मा रहने: दुग्ध उत्पादन, नरम-उसिनेर अन्डा, उच्च गुणस्तरीय दही (प्राकृतिक), unsweetened फल। दुबला उसिनेर मासु, माछा, चामल, उसिनेर आलु, तरकारी (छैन सिमी), चामल, मीठो फल: तीन वा चार घण्टा पेट फन्दामा लागि। "ट्रान्जिट" फैटी र तला मासु, माछा, सिमी, साथै अनाज, पास्ता, आलु आफ्नो सम्भव संयोजन, रोटी4घण्टा भन्दा बढी राख्न लिन्छ।
त्यसैले, एक उपयोगी खाने उसिनेर सक्छ समावेश वा मासु (माछा), ताजा तरकारी, दुग्ध उत्पादन सुखा वा, वैकल्पिक, बरु यो सबै को - फल मिश्रण।
उज्यालो खाने रूपमा पनीर वा समुद्री सही आमलेट, साथै ताजा जडीबुटी वा टमाटर भरिएको बस एक आमलेट छ। सामान्यतया, धेरै रोचक उपस्थिति हो जो स्वादिष्ट र स्वस्थ सलाद, थुप्रै व्यञ्जनहरु छन्। उबला आलु, बीट, गाजर, र अचार: उदाहरणका लागि, मूल vinaigrette «रूबिक गरेको घन», वनस्पति तेल र मानक सामाग्री को एक सेट भएको स्वादिष्ट। यो सलाद घन काटन लागि विशेष slicer प्रयोग खाना पकाउन धेरै सजिलो छ। यो एउटा अचम्मको उपकरण यसलाई धेरै पटक nicer बनाउन, कुनै पनि सलाद को पकाउने सुविधा छ!
को खाने मा मासु उत्पादन प्रेमीहरूलाई लागि पट मा खरायो वा चिकन पकाएको गर्न सकिन्छ। यो गर्न, larded लसुन मासु, धेरै टुक्रा मा कटा, को पट, एक सानो नुन र मरिच को तल मा राखे। राखे शीर्ष प्याज छल्ले र गाजर साथै स्वाद लागि celeriac। त्यसपछि त पानी पट 2/3 खन्याउन र 40-50 मिनेट लागि पहिले नै गरम मन्त्री ओवन राख्नुहोस्, 1-2 चम्मच कम बोसो खट्टा क्रीम र diced टमाटर थप्नुहोस्। Flavorful र सन्तोषजनक र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एक आहार पकवान तयार छ! उहाँलाई लागि आदर्श, मासु भोजन को "सुनौलो नियम" निम्न, कुनै पनि तरकारी, सेवा सिमी र आलु बाहेक।
अन्तमा हामी खान जो संग विचार महत्त्व बारेमा थप गर्न चाहन्छु। तपाईं आफैलाई एक स्वस्थ भोजन, उत्पादन को दृश्य को बिन्दुबाट इच्छित, तर हानिकारक सानो टुक्रा अनुमति पनि भने, यो निराश हुन दिनुहोस्।
गेहूं र यसको प्रयोग को प्रयोग
Dysbacteriosis मा भोजन
लायक छन् कि 8 खाद्य पदार्थ प्रत्येक दिन खान
त्यो राम्रो प्राप्त गर्न, छ
ठोस इन्धन रूस मा उत्पादन। निर्माता, लाभ र उत्पादनहरूको बेफाइदा को अवलोकन
"Aristocrat" केक। सल्लाह र तयारी को विशेषताहरु
GPC सम्झौता। नागरिक व्यवस्था सम्झौता। सेवाहरूको लागि GPC सम्झौता
कसरी पतिको डाह गर्न
फ्लोरिडाको आकर्षक: विकल्पहरू
आकर्षण, मास्को: तस्बिर र समीक्षा। को मास्को क्षेत्र को मुख्य आकर्षण
एडी संग जूता - प्रयास?
म साइकल एक कुखुराको भाले किन चाहिन्छ?
सोभियत नेता स्टालिन पछि कुन सोभियत घरहरू नामित छन्, र यसलाई ख्रुश्चेभ भनिन्छ
"Skyrim" को संस्करण कसरी जाँच गर्ने? कसरी "Skyrim" को संस्करण अद्यावधिक गर्ने?